सुन्दर र आकर्षक देखिन चाहनुहुन्छ ? यी घरेलु विधिको प्रयोग गर्नुहोस् | नेपालबहस
सुन्दर र आकर्षक देखिन चाहनुहुन्छ ? यी घरेलु विधिको प्रयोग गर्नुहोस्
Close-up portrait of beautiful girl looking at the camera withatowel on her head applying facial clay mask and beauty treatments lying onatable in spa near yellow flower
एजेन्सी । जन्मिदा मानिसहरु गोरै जन्मे पनि उमेर हुँदै जादा आफ्नो ख्याल नराख्दा मानिसहरु कालो हुने, चाया पोता आउने लगाएतका समस्याहरु भोगिरहेका हुन्छन् ।
जसका कारण मानिसहरु हैरान भएका हुन्छन् । उनिहरुले, अनुहारको ख्याल नगर्नु, ब्यस्ताता, घाममा हिड्नुपर्ने बाध्यतालगायतका कारण यस किसीमको समस्या झेल्नु परिरहेको हुन्छ ।
आज हामी तपाईहरुलाई गोरो हुने यस्तो उपाएका बारेमा जानकारी गराउन गईरहेका छनैं । जो घरमै बसी बसी गोरो बन्न सक्नु हुनेछ ।
त्यो पनि घरकै सामानहरुको प्रयोग गरेर । यी सामानहरुलाई मिलाएर छालामा लगाउनाले अनुहारमा गोरोपन आउनुका साथै कालोपन हट्दै जान्छ र केही दिनमा तपाइँहरुले अनुहारमा सुन्दरता पाइन्छ ।
१. मेवा र मह
अनुहार गोरो बनाउनका लागिी घरेलु उपाय मध्य मेवा र मह उपयुक्त मानिन्छ । मेवामा भएका इम्जाइम्सका कारण यसले छालाको कालोपन हटाउँछ । अनुहारको दाग हटाउन पनि मद्दत गर्छ, भने महले छालालाई नरम र मुलायम बनाउँछ ।
२. कागतीको रस, दही र गोलभेँडा
कागतीको रस, दही र गोलभेँडामा रंग बदल्ने गुण हुन्छ । त्यसैले गोलभेँडाको गुदी एक चम्चा, कागतीको रस एक चम्चा र एक चम्चा दहीको घोल लगाउनुहोस् ।
आधाघण्टा पछि पानीले धुने गरेमा यसले अनुहारमा चमक पैदा हुनुका साथै गोरोपन ल्याउन मद्दत गर्छ । कागतीले अनुहारको दाग हटाउछ, गोलभेँडाले छालाको तैलीयपनको कम गर्छ र दहीले छालामा पोषण दिनुका साथै नरम बनाउँछ ।
३. चंदनको पाउडर र नरिवलको पानी
अनुहारको गालालाई गोरो बनाउने अर्को घरेलु उपाए हो चंदनको पाउडर र नरिवलको पानी घोलेर लगाउनु । चंदनको पाउडरले छालालाई सफा बनाउँछ र दाग मेटाउन मद्दत गर्छ ।
यसले मृत कोशिकाहरु समेत हटाउँछ । जसका लागि तपाईहरुले एक चम्चा चंदन पाउडर नरिवलको पानीमा मिलाएर त्वचामा लगाउन्पर्ने हुन्छ । घोललाई लगाएको २० मिनेट पछि सफा पानीले धुनु पर्दछ ।
४. काँक्रो, गुलाबजल र कागतीको रस
अनुहारको कालोपन हटाउनका लागि काँक्रो, गुलाबजल र कागतीको रसको घोल पनि अर्को उत्तम घरेलु उपाए हो । काँक्रो, गुलाबजल र कागतीको रस मिलाएर अनुहारमा लगाएमा यसले चमक ल्याउछ । यो घोल लगाएको १० मीनेट पछि सफा पानिले पखाल्नु पर्दछ।
अघिल्लो लेखसरकारी सञ्चारमाध्यम सरकार र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ : सञ्चारमन्त्री
अर्को लेखचार देशका लागि राजदूत सिफारिस, को कहाँ-कहाँ पुगे ? [नामसहित]
भारतमा डुङ्गा पल्टिँदा १२ जनाको मृत्यु, ३० बेपत्ता !